Ny fanerena ananan'ny ankizy dia lehibe! : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 9 Desambra 2019	• 16 Comments
Ho an'ireo ankizy any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy ho an'ny tanora dia tsy maintsy misy tsindry lehibe ankehitriny fa tsy ny mpampianatra ihany no nilaza azy ireo fa mbola afaka mifidy ny fitovian'izy ireo, fa ny krizy amin'ny toetr'andro dia miteraka tsindry vondrona ihany koa. Raha toa ny fihetsika tsy misy dikany raha tsy hoe heterosexual mahazatra, dia tao anatin'izay taona faramparany izay dia nanampy ilay hevitra fa mbola afaka misafidy ny maha-lahy sy maha-vavy anao ianao ary niova fo.
Ny tsindry vondrona farany indrindra dia avy amin'ireo mpikatroka toetrandro (FFF, 666). Ary afaka milaza ianao fa be dia be ny mpampianatra atidoha mandray anjara amin'ny fametrahana tsindry amin'ny taranaka tanora indrindra. Efa nomanina ho amin'izany fikotronan'ny atidoha izany izy ireo. Izay gazety nosokafanao: feno ny fampielezan-kevitra momba ny toetrandro izy ireo ary na aiza na aiza no jerena na henoinao, dia misy ny lainga ho marina. Tena mora izany raha manana ny gazety rehetra any am-paosinao ianao; tsy hafa izany any Chine noho ny demokrasia mahamenatra antsika. Raha haverinao matetika ilay izy dia hino daholo ny rehetra. Ary raha azonao antoka koa fa afaka mampita ny fahatsapana ianao fa "tsy anjaranao" ao an-dakilasy na any am-piasana, dia ny tsindry vondrona dia hanome ny tsindry farany.
Ny endrika fahombiazana dia toa ahitana fampisehoana sary vitsivitsy miaraka amin'ny fanehoan-kevitra "Henoy ny mpahay siansa IPCC an'ny ONU". Ny tanjona dia manamarina ny fomba rehetra, fa ny milina fampielezankevitra dia mahatonga ny ankizy sy ny olon-dehibe mino fa ilaina ny dikan'izany satria raha tsy izany dia maty isika. Ary ny milina fampielezankevitra dia manatona vaovao hatrany Manana an'izany koa isika ankehitriny faritra avaratra any an-dranomasina, izay tsy ampy ny oxygen ary maty ny trondro.
David Attenborough mety ho afaka hitarika fampisehoana lainga tsara tarehy. Efa nanao izany niaraka tamin'ny vahoaka polar polar (jereo eto) ary koa niaraka tamin'ny walruses dia nisy ny porofon'ny fitaka sy fitaka (jereo eto). Samy miha-mitombo ny isan'ny mponina fa tsy mihena, ka na samy tsy misy mahafoana aza noho ny fihenan'ny vongan-dranomandry. Mandritra izany fotoana izany, ny foko iray manontolo dia mamboly ao anatin'izany fampielezan-kevitra izany, satria i David dia afaka miteny azy io amin'ny sary mihetsika amin'ny sary amin'ny teny anglisy. Na izany aza, afaka miantso ny tenany ho Sir sy Tompon'ny baiko miafina izy tsy mandainga! Tsia, an'ny elita izy ireo ary tsy mandainga, manana tsiambaratelo ihany izy ireo.
Manana karazany isan-karazany momba ny toetr'andro ianao izao ary misy tsindry mavesatra eo amin'ny tanora. Ny mantra Greta Thunberg "Tsy maintsy mihaino ny mpahay siansa" no mampatsiahy ny andron'ny dadabeny izay nanampy tamin'ny nametraka ny komity loka Nobel ary nanolotra ny tenany sy ireo namany mpahay siansa ho loka Nobel. Vakio ny fomba niasan'i Svante Arrhenius (izay notendren'ny rain'i Greta Svante Thunberg), dia ilay namorona ny teoria momba ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany nataon'ny CO2. Ny nahazoany ny loka Nobel noho izany dia tsy noho ny fahitsiana ara-tsiansa momba ny teoria, fa tamin'ny fahafahany manome ny tenany an'io loka io.
Tamin'izany fomba izany, ny razana Greta koa dia niandany ho an'ny eugenika ary noho izany dia nanana hevitra toy ny an'ny Nazi ny momba ny fahadiovan'ny hazakazaka. Tiany hampihena ny mponina maneran-tany. Ka rehefa nilaza i Greta fa tokony hihaino ny mpahay siansa IP IPCC isika, dia toa ny famerenan'ny zavatra nataon'ny dadabeny. Natolony ny namany ara-tsiansa ny namany ary ny hafa kosa nijanona. Ireo mpahay siansa izay manazava amintsika fa ny CO2 dia tsy mahamay ny tany ary tsy re akory. Tsy maintsy mihaino ireo siantifika voafidy isika. Ny vola sy ny asa dia efa zava-dehibe kokoa ho an'ny dadabe lehibe, ary mbola mihatra ankehitriny.
Lehibe ny tsindry amin'ny ankizy! Saika tsy maintsy lasa mpikatroka toetrandro ianao raha tsy te hijanona eo ivelan'ny sambo. Ary raha lazain'ny mpampianatra anao fa manafana ny tany ary eo amin'ny gazety rehetra ihany dia tsy afaka handà azy intsony ianao. Indrindra rehefa "tovovavy mahafatifaty misy braids" no manao izay tsara indrindra na aiza na aiza. Tsy misy olona toa mahatsapa fa ity Greta Thunberg ity dia avy amin'ny fianakaviana mendri-kaja izay nanana ity planina teo amin'ny talanty ity nandritra ny am-polony taona maro ary ho azy ireo no tena zava-dehibe noho ny zava-misy. Vonona ny handray an-tanana izany fampiasan-kevitra izany izy.
Ahoana no ahafahanao miaro ny zanakao amin'ity herisetra feno habibiana ity? Raha manontany ahy ianao? Tsy. Saika tsy ho vita! Mandeha mankany amin'ny fotoana izay hiposahan'ny hysteria toetr'andro ho lasa toerana avo be isika, ka ho lasa endrika vaovao fampitahorana amin'ny saron-tava "famonjena ny planeta." Hihalalina hatrany izany fa na iza na iza izay mbola tsy mino fa ny tany dia manafana ny vokatry ny CO2 ary mbola tsy mino fa ho faty isika raha tsy misy fepetra hentitra manaraka dia hahazo ny mpikirakira tsikombakomba. Hifandray amin'ny aretin-tsaina io, izay ilainao ny fikarakarana aretin-tsaina. Ny toby fanabeazana indray tao anatin'ny maokelin'ny George Orwell an-gazety mitondra ny lohateny hoe 'fikolokoloana'.
Ireo ankizy manana hevitra samihafa dia hisedra tsindry ara-tsaina mafy tokoa. Toy izany no nitranga tamin'ny fampielezankevitra momba ny fanovana ny lahy sy ny vavy ary hitranga miaraka amin'ny hysteria toetr'andro izao. Izy ireo ihany koa gepsychiatriseerd miaraka amin'ny stigma amin'ny 'mihantona plots' sy ny 'fikolokoloana' sy ny fanafody no ampiharina.
Izahay dia manatri-maso ny fampidirana ny fasam-baovao vaovao eo ambanin'ny sainan'ny avana; amin'ny alàlan'ny "mila mitsitsy ny toetrandro". Ny swastika no nanamboatra ny lalana ho an'ny avana (jereo eto). Manatri-maso ny sora-baventy fampiasa amin'ny tontolon'i Lucifianana izahay. Mifanipaka amin'y iray i Lucifer sy ny avana. Ireo mpiady avana matihanina (karama) any Greenpeace dia mirenireny ao amin'ny tontolon'ny fiaraha-monina ary ny atidoha dia ny zandriny indrindra amin'ny fampianaran'i Lucifer. Ny avana dia tandindon'ny mpiady ny fanjakana Luciferian. Vakio ny bokiko vaovao mba hahitanao izay tafiditra ao amin'ny script script; ny fomba itondrana an'izao tontolo izao ho an'ny transhender transhuman sy izay mbola azontsika atao.
Lisitry ny rohy loharano: ad.nl, fridaysforfuture.com, ericmaisel.com
Tags: CO2, Fasisma, Featured, maneran-, Greta, toetr'andro, hysteria toetr'andro, namindro-up, avana, Thunberg, warmin
9 Desambra 2019 ao amin'ny 11: 12
Mandra-pahoviana no mety ho lasa psychiatristian io tovovavy io?
9 Desambra 2019 ao amin'ny 11: 29
Vakio koa ity:
10 Desambra 2019 ao amin'ny 00: 57
Andao hanantena izy fa izy no marina, satria mieritreritra aho fa somary kisendrasendra io tovovavy io ankehitriny dia atosika ankehitriny raha toa ka nisy fandefasana (fanamarinana) lehibe momba azy manoloana an'i Greta Thunberg vao avy nidina. Ankehitriny ve dia nanome ny 'mascot' azy manokana ho fanelingelenana, ary rehefa afaka fotoana kelikely dia karazana karazana fanalam-baraka na "tsy nahitana" no namboarina nanodidina an'io Naomi?
Tena mampaninona anao kokoa izany, ry Martin (jereo ny nosoratanao momba an'i Robert Jensen). Tsikariko fa ny lahatsoratrao sy ny boky tena tsara nataonao dia mahatonga ahy tsy hisalasala loatra noho ny teo aloha, ary azo antoka fa tsy midika izany amin'ny fomba ratsy. Ilaina izany, satria ny fivoarana mahatsiravina amin'ity fotoana ity dia mihamahazo vahana, ary ny firotsahana ao anaty ary amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao tsy marina dia toa mihamalalaka hatrany isan'andro.
10 Desambra 2019 ao amin'ny 01: 52
Nieritreritra an'io koa aho. Noho izany ny tsikaritro amin'ilay horonantsary.
10 Desambra 2019 ao amin'ny 20: 49
Raha toa ianao ka efa miahiahy kely ary manantena fa efa manakaiky ny maha-azo itokiana fa tsy azonao antoka, dia efa esorina ny tombony amin'ny fisalasalana.
Naomy, tovovavy Naomy Fake, tovovavy Fake (a Greetaatje YouTube)
9 Desambra 2019 ao amin'ny 11: 43
Misaotra Andriamatoa Vrijland
9 Desambra 2019 ao amin'ny 12: 44
Raha ampitahaininao amin'ny avana ny swastika dia tsy marina ny fandaharana.
Ny swastika dia resy tsy hahomby araka ny fandaharam-potoana fa tsy ny avana avana, sa tsy izany?
Na raha tiantsika ny mandika azy amin'ny fomba toy izany fa ny swastika dia tsy voataona ho foanana ary ny fitsipiky ny vahaolana vahaolana fihetseham-po ary noho izany dia nosoloana ny faneva UN / Rainbow
9 Desambra 2019 ao amin'ny 12: 50
Ho valin'io fanontaniana io dia vakio ny lahatsoratra mifandraika amin'izany. Ao anatin'izany aho dia manazava amin'ny an-tsipiriany.
9 Desambra 2019 ao amin'ny 19: 31
Ilay swastika dia naolan'i Hitler, saingy efa fantatsika fa ny freemimety dia tsara amin'ny fanodinana. Izao ihany no mitranga amin'ny avana. Tamin'ny voalohany, ireo famantarana ireo dia mitondra fiantraikany kanefa voaolana tanteraka ary voageja ho an'ny ratsy sy ny tsindry hazo lena. Amin'izany lafiny izany, samy niniana tsy nahomby ireo famantarana ireo.
Tsy miankina amin'izany ny fanekeko an'i Martin fa afaka misalasala momba ny famerenana ny tondra-drano izahay. Raha tonga lafatra ny famoronana, tsy ilaina ny fametahana indray.
9 Desambra 2019 ao amin'ny 22: 35
Raha mamaky ny bokiko ianao dia ho hitanao ny dikan'io avana io ary ho azonao ny endrik'ilay fahitana ho avy.
9 Desambra 2019 ao amin'ny 19: 39
Manantena aho fa betsaka ny olona hamaky izany ,, Ary indrindra ny tanora.
9 Desambra 2019 ao amin'ny 19: 51
Tsy mijanona eto. Ny zavatra rehetra dia sandoka izay hitanao amin'ny fahitana tel (lainga). Mpilalao sarimihetsika avokoa izy ireo (miainga amin'ny mpanao politika sy ny antsoina hoe fanafihana). Paoma mamy io .. Fa tena lainga tokoa ary nampiasaina amin'ny fandaharam-potoana!
10 Desambra 2019 ao amin'ny 04: 09
Miresaka momba ny fahatanorana, ny tanora ary ny swastika.
Hitantsika mandeha indray izy ireo mandeha, ary avana fotsiny eny an-tsorony? Mbola averina ve ny tantara? Ny fihetsiketsehana 'fihetsiketsehana toetrandro' miaraka amin'ireo mpianatra truantante. Ny mpiady ny toetrandro Greenpeace ao Greta, Extinction Rebellion sns dia mampatahotra indrindra:
'Am 1 Dezember 1936 dia nanambara an'i Hitler das Gesetz zu Hitler-Jugend. Darin dia tafiditra tao anatin'izany Junge ab Alter von 10 Taona tao amin'ny HJ körperlich und geistig tao amin'ny Sinne an'ny Nazi unterrichtet und ausgebildet lasa müsse. '
Soloy ny H miaraka amin'ny K of 'Climate', ary '10' amin'ny '4', ary ampiharo izany koa amin'ny zazavavy, ary manana fanazaran-kevitra voafaritra tsara momba ny rafitra fampielezankevitra ao amin'ny tanora ankehitriny isika izay voan'ny atidoha sy miomana hanao hetsika manohitra ny ireo olona diso 'izay, miaraka amin'ny fiarany, fiaramanidina ary entona famonoana entona, dia mety hiteraka' ny faran'izao tontolo izao 'taona 10.
12 Desambra 2019 ao amin'ny 13: 38
Ny Sun dia tapa-kevitra
13 Desambra 2019 ao amin'ny 21: 31
Tsy misy hadalana? Tsia.
Saingy ny Sophia kely avy ao amin'ny roboton Hanson dia ao amin'ny fanamboarana ary manasongadina AI hendry tsara ary misy koa ny fizotry ny fientanam-po (mpampiasa vola Epstein).
30 Desambra 2019 ao amin'ny 00: 02
Mahavita manaitra ny fihetseham-po kokoa ny zaza kely noho ny tale mpanatanteraka
fikambanana tontolo iainana
tsy misy ranomandry ao anatin'ny folo taona? ha ha ha
« Any amin'ny sehatry ny polisy, maniry ny fandraràn'ny polisy sy ny mpamatsy "fanampiana" ianao
Nanoro hevitra ny hanolo-tsaina hanangana toby fanabeazana indray ny mpanolotsaina ara-politika! »
Total visits: 15.815.816
Iza sa inona no ao ambadiky ny lozam-piaramanidina Iraniana miaraka amin'ny sidina Boeing 737-800 PS752?
Martin Vrijland op Iza sa inona no ao ambadiky ny lozam-piaramanidina Iraniana miaraka amin'ny sidina Boeing 737-800 PS752?
Zonnetje op Iza sa inona no ao ambadiky ny lozam-piaramanidina Iraniana miaraka amin'ny sidina Boeing 737-800 PS752?